Ndị na-emepụta ihe na ndị na-ebuga mgbidi ụlọ ịsa ahụ China - Huanyu Sanitary Ware
Home > Ngwaahịa > Ngwa ịsa ahụ > Mpempe mgbidi ịsa ahụ
Mpempe mgbidi ịsa ahụ Ndị nrụpụta
Ningbo Huanyu Sanitary Ware Limited, a elu ọkachamara emeputa & Exporter na China na kemgbe na plastic ahịrị n'ihi na ihe karịrị 20 afọ na na sanitary ware ụlọ ọrụ ihe karịrị 10 afọ, Ọzọkwa. anyị ejirila usoro njikwa njikwa mma ISO 9002S na mbụ nke 1999. anyị na-arụpụta ngwaahịa ya niile na China. Ngwaahịa anyị bụ ahịrị ịdị ọcha nke ngwaahịa anyị gụnyere dị ka ndị a: isi ịsa ahụ, aka ịsa ahụ, ihe ndọtị ụgbọ okporo ígwè, ihe na-eji mmiri ịsa ahụ, mmiri ịsa ahụ, ihe ịsa ahụ, braket mgbidi ịsa ahụ, ngwa ịsa ahụ, bracket ịsa ahụ, ịsa ahụ Bidet, ngwa ịsa ahụ & ngwa ime ụlọ yana ịzụ ahịa na ya. ngwaahịa ịcha ọcha ndị ọzọ na Weebụsaịtị China emere.
Mgbidi mgbidi ịsa ahụ bụ ihe nkwado etinyere ozugbo na mgbidi ahụ, ọ dabara maka interface ịsa ahụ n'ozuzu. Enwere ike ịzụta ya na isi ịsa ahụ na hoses ịsa ahụ. Anyị nwere ọtụtụ ụdị maka ndị ahịa ịhọrọ. Ọnụ ego ahụ dị oke asọmpi. Ngwaahịa ndị dị otú ahụ nwere ezigbo ahịa n'ọtụtụ mba.
Anyị nwere ike ike ịzụlite a dịgasị iche iche nke ọhụrụ ngwaahịa dị iche iche nha na nkọwa na okenye ahịa anyị nhọrọ dị iche iche na dị iche iche chọrọ. A na-ekwe nkwa ịdị elu nke mgbidi ịsa ahụ site na teknụzụ dị elu, akụrụngwa ọgbara ọhụrụ, na njikwa mma na ọkwa mmepụta ọ bụla. Site n'ọhụụ njikwa anyị na ọganihu na-aga n'ihu, ngwaahịa ndị ahụ na-ere nke ọma n'ahịa ụwa, nke nwetara aha ọma. Azụmahịa anyị pụrụ iche na R&D, OEM, ODM.
Mpempe mmiri ịsa ahụ nke akụ na ụba
Mpempe mmiri ịsa ahụ rọba bara ụba na-ewu ewu kemgbe afọ 20. Ọ bụ ọdịdị nke ingot. Kemgbe mmepe ya afọ 20 gara aga, ma ọdịdị ya na ịdị irè ya enwetala ule siri ike. Ụlọ ọrụ ọ bụla ga-ere ya.
Zụrụ ngwaahịa sitere na ụlọ ọrụ anyị a na-akpọ Huanyu Sanitary Ware bụ otu n'ime ndị na-emepụta ihe na ndị na-ebuga Mpempe mgbidi ịsa ahụ na china. Ogo anyị dị elu Mpempe mgbidi ịsa ahụ na-ewu ewu na ndị chọrọ inweta ngwa ahịa dị ọnụ ala. Anyị nwere ọtụtụ ngwaahịa iji nye ọrụ n'ogbe. Ị nwere ike ijide n'aka ịzụta ọnụ ala dị ala site na ụlọ ọrụ anyị.